तपाईको मुस्कुराउने बानी छ कि छैन ? छैन भने अब मुस्कान छर्नुस, स्वस्थ रहनुस - ज्ञानविज्ञान
एक पटक सम्झनुस त तपाईँ पछिल्लो पटक कहिले मुस्कुराउनुभएको थियो ? सम्झनु भयो ? कन्फ्युज हुनु भयो होला । किनकी तपाँई हाम्रो व्यस्तता यति बढ्यो की हामीले के गरेका थियौ र के गर्दै छौँ भन्ने पनि झट्ट सम्झन सक्दैनौँ । कतिखेर को संग मुस्कुराएका थियौँ वा थिएनौँ पत्तै पराउदैनौँ ।
खैर केही छैन, तपाईँ सम्झनुस वा विर्सनुस त्यो ठूलो कुरा भएन तर मुस्कुराउन नछाड्नुस । जति व्यस्त भएपनि जति हतार भएपनि मुस्कुराउन भने नछाड्नुस, मुस्कुराउने प्रयत्न जारी राख्नुस । किनभने तपाईँको मुस्कानले तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारता त ल्याउँछ नै त्यो भन्दा महत्वपूर्ण तपाईँको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक फाइदा पुरयाउछ । अझ भनौ तपाईँको एक मिठो मुस्कान धेरै रोगको औषधि बन्न सक्छ ।
हास्नुको फाईदा :
एउटा भनाई छ, जो धेरै हास्छ उ धेरै बाच्छ । त्यसैले हाँस्दा खेरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुन्छ र मस्तिष्कमा इन्ड्रोफिन नामको रसायन उत्पादन गर्छ । यसलाई ह्याप्पी हर्मोन पनि भनिन्छ । रक्त प्रवाहमा सुधार ल्याएर यसले दिमागमा अक्सिजनको प्रभाव बढाउन सहयोग गर्नुका साथै रक्तचाप घटाई मुटुलाई स्वस्थ बनाउँछ । मुटु स्वस्थ्य हुनु नै हाम्रो आयु लम्बिनु हो । शायद त्यही भएर भनिएको होला जो धेरै हास्छ उ धेरै बाच्छ ।
त्यसैले मुहारमा दुःख हैन हासो र मुस्कान छर्नुस् अनी बाच्नुस् धेरै बर्ष ।
हास्नुको जस्तै रुनुको पनि फाइदा :
भक्कानो छोडेर वा सुँक्क-सुँक्क गरेर रुनु शरीरका लागि स्वस्थ्यकर मानिन्छ । यस अवस्थामा व्यक्ति आफूलाई बालकजस्तो शारीरिक एवं मानसिक तनावप्रति खुला र खुकुलो छोडदिन्छ अनि रुन थाल्छ । जब मानसिक या शारीरिक दुःख, पीडासँग उसको साक्षात्कार हुन्छ, तब प्रतिक्रियास्वरूप हाम्रो शरीरको मांसपेशी संकुचित हुन थाल्छ ।
जुन शरीरको रक्षातन्त्र प्रक्रिया हो । जुन बेला हामी दुर्घटनाबाट गुज्रिरहेका हुन्छौं, त्यसबेला अत्यधिक पीडाले हामी आफूलाई सन्तुलन गर्न सक्दैनौं । शरीरले आफ्नो क्षमताको कारण अत्यधिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो सन्तुलनलाई गुमाउँदैन, जब कठिन परिस्थिति जान्छ तब मांसपेशीहरूमा जम्मा भएर रहेको तनाव आँसुको रूपमा आँखाबाट निस्किन थाल्छन् ।
एक स्वस्थ्य र सन्तुलित शरीर सहज तरिकाले दुःख, दर्द, पीडाबाट उत्पन्न शारीरिक तनावलाई आँसुद्वारा व्यक्त गर्ने बाटो बनाउँछ । सर्वेक्षणअनुसार महिला पुरुषको तुलनामा कम तनावग्रस्त हुन्छन् । उनीहरू भावनालाई सजिलैसित आँसुको माध्यमले व्यक्त गर्दछन् । यसै कारण होला पुरुषको अपेक्षा महिलामा हृदयरोग कमै हुन्छ ।
कुनै-कुनै परिवारमा वंशाणुगत रोग पाइन्छ । यसलाई फैमिलियल डिस्टोनिया भनिन्छ । यसमा जब बच्चा रुन्छ तर उसको आँखाबाट आँसु झर्दैन । आँखा सुक्खा रहन्छ । यस्ता बालबालिकाहरू क्रूर, झनक्क रिसाउने र आक्रामक प्रवृत्तिका हुन्छन् । यस्ता बालबालिकाको पूर्ण रूपले मानसिक विकास हुन पाउँदैन ।
बढ्छ आँखाको ज्योतिः आँखामा आँसु आउनाले आँखाको नानी र परेलीमा कचिलोपन बढ्छ । वैज्ञानिकहरूले यस कुरोलाई सिद्ध गरेका छन् कि रुनाले आँखाको सुन्दरता बढ्छ । यी वैज्ञनिकहरूको मतअनुसार आँखाको कोर्नियाको परत कन्जकटाइवालाई अ श्रुगन्थीद्वारा निस्किने आँसुले ओसिलो बानाइदिन्छ । फलस्वरूप आँसुमा रहेक शारीरिक तत्ववहरूद्वारा सुन्दरता निखारेर ल्याउँछ ।
आँखाबाट आँसु निस्किने बेला हारडेरियन ग्रन्थीबाट एक प्रकारको तैलीय पदार्थ निस्किन्छ, जसको सहायताले कोर्निया ओसिलो र रसिलो हुन्छ । महिलामा पुरुषको अपेक्षा बढी आँसुको उत्पादन हुन्छ । यही कारण हो कि महिलाको आँखा बढी सुन्दर हुन्छन् । अत्यधिक कुनै पनि चिज राम्रो होइन, त्यसैले अत्यधिक रुनाले भने आँखाको दृष्टि गुम्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
ब्याक्टेरिया समाप्तः आँसुमा यस्तो किसिमको एन्टिबायोटिक्स हुन्छ कि जसले कीटाणुबाट आँखाको रक्षा गर्दछ । आँसुमा एक प्रकारको लिसोजाइम नामक तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसले पाँचदेखि १० मिनेटमा नै ९०-९५ प्रतिशत ब्याक्टेरिया नास गरिदिन्छ ।
शरीरबाट टक्सिन निकाल्दछः धेरैजसो अनुसन्धानमा के देखिए भने जब हामी बढी दुःखी वा अवसादमा हुन्छौं, यसबेला शरीर भित्र केही टक्सिन केमिकल्स बन्न थाल्छ । ती विषाक्त तत्ववहरू रुदाँ आँसुको बाटो भएर शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ ।
मुड ठीकः कहिलेकाहीँ शरीरमा मेग्जिननामक तत्वव बढी भएर हडबडाहट, हैरानी, थकान, अनाहकमा रिस उठ्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । यस अवस्थामा रुनाले शरीरमा म्यागजिनको स्तर कम हुन्छ । फलस्वरूप व्यक्ति आफूलाई हल्का र फ्रेस अनुभव गर्छ ।
तनाव घट्छः अत्यधिक तनावको अवस्थामा रुनाले केही मात्रामा राहत मिल्छ । रुने प्रक्रियाको दौरान शरीरमा एन्डोफ्रिन ल्युकामाइन, एन्काफालिन तथा प्रोलेक्टिननामक तत्ववहरूको स्तर कम हुन्छ । जसले तनाव कम हुन्छ ।
Don't Miss it तपाई समयमै सुते पनि अत्याधिक निन्द्रा लाग्ने गर्छ ? यसका कारण हटाउने उपाय
Up Next कपालमा नियमित तेल लगाउँदाका फाइदा यस्ता छन् जानिराखाैँ